UV oriọna oriọna maka nhicha mmiri → Acuva • Yachts • Campers • .lọ
UV ikanam oriọna - Mụta banyere irè na onye ọrụ-enyi na enyi Mgbanwe teknụzụ dị ọcha mmiri!
Kedu otu esi ehicha mmiri?
Ihe mbụ batara onye ọ bụla n’obi bụ ịhapụ ya ụfọdụ filtr.
Unyi ga-anọrọ na nzacha ma anyị ga-adị ọcha mmiri.
Otú ọ dị, ihe a ga-eme n'ọnọdụ ebe mmiri dị ka ọ dị ọcha, na ihe ndị dị n'ime ya nwere ike ịdị na-emerụ ahụ, nke dịkwa ize ndụ na ahụike anyị nje, nje na nje ndị ọzọ?
Nanị ịgafe ya na nzacha agaghị eme ihe ọ bụla. N'okwu a, mmiri ga-kpocharama ọbụghị sọchaa.
Emezila mmiri - hichaa ya!
Nhicha, ọgwụgwọ ma ọ bụ ịdị ọcha bụ usoro ihe mgbagwoju anya nke enwere ike ịrụ, dịka ọmụmaatụ, iji kemịkal.
Ọtụtụ n'ime ha na-emetụta gburugburu ebe obibi, ọkachasị ihe ndị dị n'ime mmiri. Anyị achọghịkwa iji nsi na-egbu onwe anyị ma rie mmiri na-adịghị atọ ụtọ na isi na-esi ísì nke ime ụlọ ahịa ọgwụ.
Ya mere, ihe iji?
Can nwere ike ozone. Ọgwụ Ozone na-ehicha nke ọma ma na-anọpụ iche na ụtọ mmiri. Agbanyeghị, o siri ike iche n'echiche mmiri mmiri dị n'ụlọ.
Yabụ, kedu ọsọsọ, ọnụ ala, n'ụzọ dị mma, n'ụzọ dị mma na gburugburu ebe obibi na nke na-adịghị atọ ụtọ iji sachaa mmiri n'ụlọ… n'ogige, na ụgbọ mmiri, n'ọfịs na n'ụlọ ahịa?
UV oriọna oriọna si Acuva
Anyị na-ewetara gị ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu Acuva. Anyị bụ naanị onye na-ekesa ngwa ahịa Acuva na ahịa Polish.
Acuva bụ ihe eji eme ka mmiri dị ọcha UV ikanam oriọna. Ndị a bụ ngwaahịa ọhụụ kachasị emepụtara na Canada.
Ime ka mmiri dị ọcha iji sistemụ Acuva bụ ọbụna Oge 100 dị irè karịa iji usoro asọmpi.
Ọzọkwa, ojiji nke UV ikanam oriọna na-eme ka ngwa ahịa Acuva bụrụ ezigbo ngwọta ọ bụghị naanị maka ụlọ na ọfịs, kamakwa ọ dị oke mma maka ịsacha mmiri na ụgbọ mmiri ma ọ bụ ogige.
Ime ka mmiri dị ọcha site na iji Acuva UV-LED dabere na ihe ọmụma ọgbara ọhụrụ na ụlọ obibi. Enweghị kemịkalụ, dị ka chlorine, na-abanye na mmiri.
deletes 99,9999% nke nje nje na nje
A na - eme ka mmiri dị ọcha naanị n'ihi nsonazụ ya A na-ewepụ 99,9999% nke nje, nje na ọrịa ndị ọzọ niilenke ahụ nwere ike ibute nsogbu ahụike, nke ga-adịkwa mfe isi na nzacha mmiri ọ bụla.
Ha na-eji ihe nhicha mmiri Acuva UV, anyị nwere ike iri mmiri site na mmiri iyi na ọdọ mmiri na-enweghị atụ ụjọ na anyị ga-arịa ọrịa site na nje bacteria, nje ma ọ bụ microorganisms bi na mmiri. UV ikanam oriọna ga-egbu nje, gụnyere SARS-COV-2na nje bacteria nwere ike ịkpata nsogbu afọ.
Ime ka mmiri dị ọcha site na iji oriọna UV-LED adịghị emetụta uto ya. Bacteria, nje na nje na-anwụ anwụ, mana mmiri adịghị agbanwe agbanwe. Enweghị ihe ewebata, ya mere mmiri ahụ na-atọ ụtọ otu ọ dị ka ọ dị tupu ehichaa ya. Isi ya na agba ya agbanweghịkwa. Acuva UV-LED purifier anaghị eme ihe ọ bụla karịa inye ya ọkụ.
Ime ka mmiri dị ọcha gụnyere iji obere wavelength malite na 250 ruo 280 nm. Ngosipụta dị otú ahụ na-eme ka DNA nke ụmụ nje ndị dị na mmiri mebie. N'ihi ya, a na-eme ka mmiri dị ọcha. 99,9999% nke nje niile, nje na ọrịa ndị ọzọ na-anwụ.
Teknụzụ disinfection na-eji oriọna UV eme ihe ugbu a ma na-ejikwa ya eme ihe n'ọtụtụ ebe akụ na ụba.
Agbanyeghị, ịchọghị ịma nke a, n'ihi na iji Acuva UV LED sistem dị mfe. Ikwesighi ijikwa ihe mgbagwoju anya. Kwesighi icheta ihe ọ bụla. Acuva UV LED ihe nhicha mmiri a na-eji n'otu ụzọ ahụ dị ka mgbata mmiri.
Ọzọkwa, sistemụ mmiri mmiri Acuva UV-LED dị obere. Ha na-ewe obere oghere, ya mere ha zuru oke maka ndị njem, ndị na-ama ụlọikwuu na n'ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri.
Enwere ike iji ha mee ụlọ dị iche iche n'oge okpomọkụ, ụlọ ahịa, ọfịs, ụlọ nri, yana ụlọ nwere ọtụtụ ezinụlọ.
N'adịghị ka mmiri na-asachapụ, oriọna UV-LED anaghị akwụ ụgwọ.
Kwesighi ikpocha ma ọ bụ dochie ihe ọ bụla. Ọ dịghị ihe na-ekpuchi. Ọ dịghị mkpa ịchịkwa ọkwa nke mmetọ mmetọ. N'ebe a, oriọna UV-LED na-enwu na mmiri.
Ojiji nke oriọna ndị na-acha ọkụ ọkụ bụkwa nnukwu ihe maka onye ọrụ. Ọ nwere mmetụta dị mma na arụmọrụ na-enweghị mmezi nke usoro ọgwụgwọ mmiri niile.
Acuva Arrow 5 UV-LED - ihe nhicha mmiri na mgbata
10 + afọ akwụkwọ ikike
Ọ nwere ogologo akwụkwọ ikike na ndụ. Obu bulbs mkpa ka edochi ha anya. Ikanam oriọna oriọna nwere akwụkwọ ikike 10 + afọ, ekpola ọkụ, rụọ ọrụ ozugbo ị gbanyụrụ ma ghara ịgba ọkụ.
N'adịghị ka oriọna emere na teknụzụ ọdịnala, ngwaahịa Acuva UV-LED dịkwa mma na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na enweghị Mercury na oriọna oriọna LED.
Acuva Arrow 5 UV-Ikanam - nzacha mmiri
UV-LED nwekwara oke ọkụ eletrik karịa usoro UV nke sitere na bọlbụ mercury dị na mbụ. Acuva UV-LED sistemụ na-emegharị ka ike batrị. Enwere ike ijikọ ha na ike ọkọnọ 12V yana AC DC.
Acuve na-enye ngwaahịa etinyere maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọrụ ọ bụla. Site na mbara igwe UV-LED dị ọcha, ị nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ nwere ikike nke 5 lita kwa nkeji na ndụ ọrụ nke 900 lita.
Acuva Eco NX-Silver UV-LED - ihe nhicha mmiri na mgbata
Kwụsị ichegbu onwe gị banyere mmiri mmiri mmiri gafere na ụgbọ mmiri gị. Jiri mmiri na-apụ apụ ma gwọọ ya tupu ị drinkingụọ mmiri site na iji Sụchaa Ọcha UV-LED. Kporie mmiri mmiri na-adịghị ọcha na ụgbọ mmiri gị na ebe obibi gị ma ọ bụ ezumike n'ụlọ na-enweghị mmiri.
Acuva Eco NX-Silver UV-Ikanam
Họrọ usoro nhicha mmiri Acuva Site na UV-LED ị ga-ahọrọ ngwaahịa kachasị mma nke na-enye mmiri dị ọcha, na-enweghị mmiri maka ụlọ gị, ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ.
UV ikanam oriọna vs. UV oriọna
Usoro ọgwụgwọ UV maka usoro eji eji oriọna UV. Agbanyeghị, enwere nnukwu nchegbu gbasara mmetụta gburugburu ebe obibi yana erughị arụmọrụ arụmọrụ nke oriọna UV.
UV ikanam oriọna UV oriọna
Kọmpat Odighi nsogbu
Oriri ike Obere Ogologo
Mmetụta gburugburu ebe obibi Enyi na enyi Eji Mercury mee ihe
Ndụ ọrụ 10 + afọ Otutu afọ 1
Mgbanwe iyi UV enweghị Ọ na-abụkarị n'afọ ọ bụla
Oge mbido Ozugbo Ogologo
acuvaekọlọ ecoacuva eco uv duruacuva duru UV ọcha usoroacuva ọcha usoroteknụzụ acuvaacuva teknụzụ incAcuva UV ikanamacuva uv mmiri nchachammiri acuvaacuva mmiri iyoacuva usoro nhicha mmiriacuva mmiri na-eme ka mmiri dị ọchausoro ọgwụgwọ mmiri acuvaAllegro UV oriọnaGermicidal UV oriọnaUV Ikanam germicidal oriọnaGermicidal UV oriọna maka mmirindu mmiri dị ọchaMa oriọna ndị UV butere na-emerụ ahụbu oriọna bu oria ojoouv mmiri disinfectionmmiri ọgwụ disinfectionmgbochi mmiriụzọ disinfection mmirimmiri nke mmiri ọ drinkingụ .ụuv mmiri disinfectiondisinfection nke tankị mmiri ọ drinkingụ drinkingụọcha ụlọUV dugara oriọna maka nsị mmirioriọna germicidalduru na oriọna UVoriọna oriọna UV radieshonduru oriọna UVduru UV oriọna nyochaOriọna UVuv ma ọ bụ oriọna oriọnauv oriọna maka mmiriuv na oriọna oriọnaoriọna oriọnaUV oriọna oriọnaduru na mmirikacha mma duru UV oriọnakacha mma UV oriọnammiri dị ọchaọgwụgwọ mmiri ozuzoọcha nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụọgwụgwọ ụlọ ọrụ mmepụta ihelanarị mmiriime ka mmiri dị ọcha n'ụlọime ka mmiri dị ọcha n’olulu mmiriọcha nke mgbata mmirimmiri dị ọcha site na olulu mmirimmiri dị ọchaIhe ntanetị UVihe nhicha mmiri nke ultravioletuv duru mmiri dị ọchauv duru mmiri ọgwụuv usoro ọgwụgwọ mmiriuv-edu mmiri dị ọchaụlọ ọrụ na-eme ka mmiri dị ọchagini bu nsfmmiri na yachtmmiri na motohomeduru bọlbụ maka oriọna UVduru bọlbụ maka oriọna UV